Soo dejisan Driver Booster 7.3.0.665 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Driver Booster
Driver Booster – waa software si loo cusbooneysiiyo darawallada si dhakhso ah iyo waxtar leh. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kumbuyuutarkaaga ku sawirto adigoo isticmaalaya darawalnimada, khaladaadka iyo khaladaadka oo maqan ama soo rogo habka casriga ah ee casriga ah kaas oo si madaxbannaan u soo dejiya kuna rakibaya darawalada inta lagu jiro nidaamka hoos u dhaca. Driver Booster wuxuu leeyahay macluumaad weyn oo kuu ogolaanaya inaad ku cusbooneysiiso dhamaan darawallada iyo walxaha cayaaraha ee kombuyuutarkaaga. Barnaamijkani wuxuu bixiyaa darawallada kuwaas oo ka gudbay imtixaanka Microsoft WHQL, taas oo ah, kuwa si ammaan ah loo soo dejisan karo loona rakibay nidaamka. Driver Booster wuxuu taageersan yahay muuqaalka dardargelinta cayaaraha kaas oo soo jiidanaya nidaamka asalka ah iyo adeegyada aan loo baahnayn ee Windows si loo helo waxqabad tayo leh inta lagu jiro ciyaarta. Driver Booster wuxuu ka caawiyaa in uu nidaamka ku jiro xaalad xasiloon oo uu ka hortago shilalka ama qaboojiyaha sababtoo ah darawalada aan shaqada lahayn ama aan firfircooneyn.
Saldhigga weyn ee darawaladda
Mashiinka taraafiga ah ee fiican
Darawaliinta waxqabadka cayaarta ee ka fiican
Habka casriyeynta saxda ah
Tijaabin darawaliinta si loogu rakibo nabadgelyo
Faallo ku saabsan Driver Booster
Driver Booster Xirfadaha la xiriira
Qalabka lagu keydiyo laguna soo celiyo xogta nidaamka. Softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu abuuro nuqul dirawalk a Hard drive isla markaana uu ku wareejiyo xogta kombuyuutarka xog kale.
Darawalka Darawalka – software ayaa loogu talagalay in lagu casriyeeyo darawallada maqan ama kuwa soo maray ee qalabka kombiyuutarka lagu rakibay.